ဟော်ကိုင်းဒိုး တက္ကသိုလ် ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
( ငယ်ရွယ်တုန်း ရည်မှန်းချက်ထားပါ ) ဆိုတဲ့ စာကြောင်းဖြင့် သိခဲ့တဲ့ ခုရခုပညာရှင်က ဖွင့်ထားတဲ့ ( ဆာပိုလိုစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ ) က ဒီကျောင်းကနေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရဲရင့်မှုဖြင့် အနာဂါတ်ကို ရှင်လင်းထားပြီး ရှေ့ ပြေးနေတဲ့ စိတ် နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူမှုပာယရေးကို အဓိကထားရှိတဲ့ ကျောင်းအစဉ်အလာဖြင့် ဆွဲဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသားများလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဂျင်ဂိုပင်တန်းနဲ့ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတွေက ဒီကျောင်းဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အချိန်တွေရဲ့ ထည်ဝါခန့် ညားမှုကို ခံစားစေမယ့်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ တက္ကသိုလ်နားမှာ ရှိတဲ့ အရသာရှိပြီးဈေးသက်သာတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ ဝန်းရံနေတာလည်း ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
Hokkaidō sapporoshikitaku kita9jōnishi 5-chōme
JR Sapporo ဘူတာ မှ ၇ မိနစ်ခန့် ( ပင်မဂိတ်ပေါက်ထိ )
ဒီဆောင်းဦးရာသီကို အကြံပေးမယ် ! ( ဆာပိုလို ) ရဲ့ မိုမိဂျိနာမည်ကြီး ၆ နေရာလက်ရွေးစင်
img src="https://cdn.zekkei-japan.jp/images/articles/223b1d3e5caf လူကြီးမင်းများ ဆာပိုလို လို့ ပြောရင် တစ်ခုခုများ စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလား ? ခေါက်ဆွဲနဲ့ အသားကင် စတဲ့ အစားအသောက်ကောင်းများနဲ့ နာရီစင် နဲ့ ...